Arkiifiyada Sirdoonka ee Farshaxan - SmartMe
Tag archives: sirdoonka macmal
Dom » Gelitaannada lagu calaamadeeyay "sirdoonka macmal"
Barnaamijka AI Tech wuxuu ka bilaabmaa shan jaamacadood
ai tech, barnaamijka, sirdoon macmal ah, dugsiga
Barnaamij tijaabo ah, AI Tech, ayaa la bilaabay, yacni Akadeemiyada Codsiyada Casriga ah ee Casriga ah. Mashruucu wuxuu ka kooban yahay bilaabida barnaamijyo waxbarasho oo ku saabsan cilmiga tikniyoolajiyadda cusub iyo sirdoonka macmalka ah ee shan jaamacadood oo ku yaal Poland. Isaga ...
Amazon waxay ku maamushaa darawalada sirdoonka macmalka ah
ai, Amazon, sirdoon macmal ah
Shirkadda Amazon ayaa go’aansatay inay bilawdo la socoshada darawaladeeda sirdoonka macmalka ah. Dhammaantood waxaa loo maleynayaa inaysan si buuxda u xakameyn karin shaqaalaha, laakiin waa sabab wanaagsan. Amazon waxay rabtaa inay xakameyso shaqaalaha darawallada Amazon waxaa lagu qasbay inay saxiixaan foom ...
Sirdoonka Cilmiga ah si loo abuuro daawo loogu talagalay COVID-19?
17 Febraayo 2021
COVID-19, coronavirus, sirdoon macmal ah
Seynisyahannadu waxay rajeynayaan in mahadsanida Sirdoonka Artifishalka ay suurtagal noqon doonto in daawo loo abuuro COVID-19. Illaa iyo hadda, Sirdoonka Artificial waxaa loo isticmaalaa in lagu baaro keydka macluumaadka dawooyinka hadda la heli karo. Sirdoonka Artifishalka ah ee daawo u ah COVID-19? Saynisyahanno adeegsanaya Artificial ...
Sirdoonka macmalka ah ee ladagaalanka cudurada maqaarka
daawo, sirdoon macmal ah, caafimaadka
Baarayaasha Jaamacadda Göteborg waxay soo saareen algorithm awood u leh inay xaqiijiso oo ay qiimeyso dhaawacyada maqaarka si la mid ah sida dhakhaatiirta maqaarka. Tani waa inay ka caawiso dhakhaatiirta caafimaadka inay go'aamiyaan heerka suurtogalka ah ee horumarinta kansarka maqaarka. Bukaannada ...
Albaab cusub oo cusub ayaa ku aqoonsan doona adiga iyo qoyskaaga! Sidee tani u suurta gal tahay?
23 Janaayo 2021
gambaleelka albaabka, sirdoon macmal ah, video gambaleelka albaabka
Shirkadda Kami ayaa shalay soo bandhigtay wax soo saar hubaal ah inuu qalbigaaga kasban doono. Waxaan ka hadleynaa albaab cusub oo albaab, taas oo, mahadnaqa kamaradda la dhisay iyo caqliga macmalka ah, ay si fudud kuu aqoonsan doonto adiga iyo kuwa aad jeceshahay. Sidan oo kale ...
Panasonic wuxuu muujinayaa TV leh AI
9 Janaayo 2021
PANASONIC, sirdoon macmal ah
Panasonic wuxuu soo bandhigay TV cusub oo leh sirdoon macmal ah. Tani macnaheedu maahan in ugu dhakhsaha badan TV kastaa awoodi doono inuu soo bandhigo? Malaha qof walba maahan, laakiin in badan oo iyaga ka mid ah. Qaabka cusub ee su’aashu ka taagan tahay ayaa ah ...
Loon waxaa tijaabin doona sirdoonka macmalka ah
google, loon, sirdoon macmal ah
Google waxay qaadaysaa tallaabo kale oo weyn oo dhanka sirdoonka farsamada ah ah. Baalalka loo yaqaan 'Loon balloons', oo ah inay bixiyaan internetka, waxaa tijaabin doona AI. Loon waa mashruuc hoosta baalasha Alphabet, shirkadda waalidka ee Google. Shirkadda ayaa ...
Pope Francis oo ku saabsan sirdoonka macmalka ah.
Pope Francis, sirdoon macmal ah, Vatican
Pope Francis waa shaqsi isku dayo inuu la socdo wixii ku soo kordha. Kama hadlayno oo keliya arrimaha kaniisadaha, ama arrimaha siyaasadda, laakiin sidoo kale tikniyoolajiyadda. Baadariga wuxuu ka hadlay robotikada iyo caqliga macmalka ah ...